Hatsarao ny fanatanjahan-tena ataonao amin'ny Pedometer ++ ho an'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Ny fahatongavan'i Apple Watch dia fiovana lehibe teo amin'ny tontolon'ny fahasalamana. Ny tena marina dia nandeha lavitra kokoa tamin'ny fahatongavan'ny rafitra fiasa vaovao ho an'ny famantaranandro paoma ary tamin'ny fanokafana izay nidika ho an'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo. Marina tokoa fa ireo rehetra ireo dia nahazo tombony tamin'ny fampiharana lasa protagonist androany: Pedometer ++.
Angamba ny fanontaniana lehibe tokony hovaliana alohan'ny hiresahana momba ny Pedometer ++ dia ny antony indrindra tokony hametrahanao azy raha manana fampiharana ara-pahasalamana ianao? Eny, noho ny antony telo izay nihatsara be tamin'ny fanavaozana farany azy. Te hahafantatra azy ireo ve ianao? Holazainay aminao eto ambany ny momba azy ireo!
Ny fampifanarahana data dia voalohany amin'ireo lafiny misongadina ao amin'ny Fampiharana Pedometer ++ ho an'ny Apple Watch. Raha ny marina, ny algorithm ampiasainy dia manisa ny dianao mihoatra ny fampiharana an'i Apple manokana, Health. Tsara izany, sa tsy izany? Satria azonao atao koa ny manao azy amin'ny fitaovana roa, ny iPhone sy ny fiambenana.
Amin'ny lafiny iray, ny interface tsara amin'ny famantarananao dia azo namboarina ka na dia manana famantaranandro mahazatra manamarika ny fotoanao aza ianao dia afaka mahita ny angon-drakitra ilaina amin'ny hetsika ara-batana ataonao. Midika izany fa ho eo amin'ny fotoana rehetra izy ireo nefa tsy misy fampidinana fanampiny. Toa tsara ihany koa, sa tsy izany? Ary farany, ny fiasan'ny Workout dia midika fa afaka manara-maso amin'ny fotoana tena izy ny fanatanjahantena ataonao ianao rehefa mifantoka amin'ny fampiharana azy ianao. Ho afaka hiditra amin'ny dingana tsy nataonao ihany ianao, fa koa ny fotoana sy ny kaloria nodorana.
Pedometer ++ dia iray amin'ireo fampiharana ireo mendrika ny manandrana. Ho fanampin'izany, maimaimpoana ny kinova ho an'ny iPhone sy Apple Watch. Sahinao ve ny manandrana azy ireo anio ary manomboka tsara ny tanjon'ny fanatanjahanao amin'ny 2016?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Hatsarao ny fanatanjahan-tena ataonao amin'ny Pedometer ++ ho an'ny Apple Watch
Ahoana ny fahafantarana ny isan'ny tweaks napetrakay